चिल्लो कारले भोक मेटाउँदै छ सडक पेटीका कुकुर र मन्दिरका बाँदरको – Dcnepal
चिल्लो कारले भोक मेटाउँदै छ सडक पेटीका कुकुर र मन्दिरका बाँदरको
प्रकाशित : २०७७ वैशाख ५ गते ८:१३
काठमाडौं । कालो चिल्लो कार सडकको छेउमै रोकियो। कार देखाउन निस्केका होलान, समाते छ ठिकै गर्यो! नजिकै प्रहरी चेकिङ भएकाले धेरैको मनमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो। अलि नजिकै पुग्दा अर्कै दृष्य देखियो।
कुकुरहरुले भाडाँमा भात खाइरहेको थिए। एक सुन्दर महिला चिल्लो कारमा विलासिताका वस्तु राखिने कारको डिकीमा राखिएको भातको भाडाँबाट डाडुले कुकुरलाई भात थप्दै थिइन्। विहेमा भोज खाइरहेका जन्तीहरुलाई जस्तै।
लकडाउनको २४औं दिनको यो दृष्य हो पुलचोक ललितपुरको। रिपोर्टिङका लागि हाम्रो सवारी साधन हुँइकिँदै थियो। यो अच्चमको दृष्य देखेपछि सवारी रोकेर हामीले जिज्ञासा राखेका थियौँ, कहिलेदेखि? ‘काठमाडौंबाट ७० प्रतिशत जनसंख्या बाहिरियो भन्ने समाचार सुनेकै दिन हामीले जनावरको बारेमा सोचेका थियौं। त्यो दिन लकडाउनको अघिल्लो एक दिन थियो’, उनले भनिन्।
विश्वमै कुकुरको पूजा गरिने देश नेपालमा कोरोनाको सम्भावित जोखिमबाट जोगिन गरिएको लकडाउनका कारण सडकमा भएका कुकुर र विभिन्न मन्दिरमा भएका बाँदर सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन्। मानिसहरुको आवतजावत हुँदा दिएको कुरा खाने यी जनावरलाई लकडाउन भएपछि खानाको समस्या परेको छ।
बोल्ने भएको भए सरकारको खरो विरोधमा आउँथे होला। बोल्दैनन् र कसैले यिनीहरुको बारेमा सोच्दैनन्। जनावरको बारेमा काम गर्ने संस्था ‘स्नेहा केयर’ की फाउण्डर स्नेहा श्रेष्ठलाई सडकका कुकुर र मन्दिरका बाँदरको चिन्ताले पिरोलिरहेको छ।
‘एउटा मात्र अनुरोध गरेकी छु मैले, यी जनावरहरुका लागि पनि तपाईँले पकाउने खानामा एक गास बचाउनु होला र छतमा राखिदिनुहोला,’ चराचुरुंगी पिर गर्दै थिइन्, ‘हामी मान्छे हो बोल्न सक्छौं, मलाइ भोक लाग्यो, प्यास लाग्यो भन्न सक्छौं, यिनीहरुले कसलाई भनुन्, कसरी भनुन्’, कुकुरलाई खाना थप्दै उनले भनिन्।
हातमा आइफोन बोकेकाहरुले राहत लिएका समाचार आए। गलामा सुनको सिक्री लगाएर राहत लिन आएका समाचार पनि आए। एउटा चिल्लो कार चडेर हिँड्न सक्ने स्नेहाले आफूले खान लागेको गाँस जनावरलाई बाँढ्दै हिडेकी छन्।
‘हामीले ३ वटा गाडी बनाएर विभिन्न रुटमा जाने गरेका छौं। सधैं एउटै रुटमा आउँदैनौं यिनीहरुलाई पनि बानी पर्छ के, हामीलाई नै कुरेर बस्छन्,’ जनावरलाई सधैं पाल्न नसक्ने भए पनि जीवन बचाइदिन लागेको बताउँदै थिइन् उनी। ‘भृकुटीमण्डपमा त ३ वटा कुकुर मेरछन्’ विश्वमा कोरोनाको महामारीले दिनमा हजारौंको ज्यान लिइरहेका बेला स्नेहाको मनमा कुकुर मरेको प्रति स्नेह थियो।
‘हामीले आफै बनाएर विभिन्न ठाउँमा भएका एनिमल लभरहरुकोमा पनि पु¥याइदिने गरेका छौं,’ उनले बताउँदै थिइन्। खानाको व्यवस्था कसरी भइरहेको छ त ? ‘विदेशबाट अनि नेपालमा भएका जो एनिमल लभर हुनुहुन्छ उहाँहरुले अनलाइनबाट, इ–सेवाबाट मलाइ सहयोग गर्नु भएको छ’ , हाम्रो पश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन्, ‘कहीँ बाट नभए पनि गर्नुपर्छ, म त के भन्छु भने सबैले आफूले खाने एक गास बचाएर यिनीहरुलाई पनि दिउँ।’
त्यसो त केही सदृदयी मनहरुले अहिले पनि सडकमा अलपत्र परेका गाईबाच्छा, कुकुर र बाँदरलाई खाना उपलब्ध गराइ रहेका छन्। पुशपति क्षेत्र विकास कोषले पनि गाईबाच्छा, कुकुर र बाँदरलाई खाना खुवाइ रहेको छ। तर यो प्रयाप्त छैन। खान नपाएर सडकमा रहेका कुकुरहरु आक्रामक हुन थालेका छन्। त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ।
तस्वीर : कमल साउद